येशूनीति र विवाह | eNepaliKhabar.com
येशूनीति र विवाह
(भजुराम तखाछेँ श्रेष्ठ)
नेपालमा होस् वा जहाँसुकै होस् जब दुई हृदयहरू एक-आपसमा प्रेमले गाँसिन थाल्छ तब बिबाह गर्न कुनै मौसम वा सकुनको दिनले छेकिँदैन। कतिको निम्ति त बिभिन्न कारणहरूले बिबाह नगर्नु नै आकर्षित बिकल्पको रूपमा रहेको पाइन्छ। कुनै युवाले युवतीतर्फ आफ्नो आत्मपरिवर्तन गर्छ वा युवतीले युवातर्फ आफ्नो आत्मपरिवर्तन गर्छ तब तिनीहरू बैवाहिक जीवन बिताउन इच्छुक हुन्छ। आत्मपरिवर्तनलाई अङ्ग्रेजीमा कनभर्जन भनिन्छ। सुखी तथा समझदारी दाम्पत्य जीवन बिताउन कसलाई जीवनको साथी बनाउने भन्ने विषयमा सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ।
येशूनितिमा विवाह तथा पतिपत्‍नीको समानताको बारेमा के छ भनेर हामी एक छिन केलाएर हेरौँ। प्रथमत: विवाह परमेश्‍वरले नै स्थापना गर्नुभएको संस्था हो भनेर येशूको भनाई छ।
यदि परमेश्‍वरले बिबाहलाई स्थापना गर्नुभएको थियो भने येशूले किन बिबाह गर्नुभएन ? यदि उहाँले बिबाह गर्नुभयो भने कसैको बिरोध छ ? भनेर दाभिन्ची कोद भन्ने पुस्तकमा एक जना पात्रले सोधेको थियो। यथार्थमा उहाँले दुई कारणले बिबाह गर्नुभएन । प्रथमत: उहाँ मानिसको पापको मुक्तिको निम्ति आउनुभएको थियो, त्यस लक्ष्यबाट उहाँ बिचलित हुन चाहनुभएको थिएन। दोस्रोमा नारीप्रति उहाँको ठूलो सम्मानले गर्दा हो किनभने उहाँलाई थाहा थियो उहाँको हुने छिटो मृत्युले नारीलाई बिधवा हुन दिन उहाँ चाहनुभएको थिएन।
धर्मशास्त्र बाइबलको अनुसार परमेश्‍वरले यावत थोकहरू ६ दिनमा सृष्टि गर्नुभयो र सातौँ दिन अर्थात् शनिवारको दिन बिश्राम लिनुभयो अर्थात् यस जगत परमेश्‍वरको सृष्टिबाट भएको हो भनेर ठोकुवा गर्न त्यो दिन संसारमा पाप आउनुभन्दा अघिनै सम्झनाको निम्ति समस्त मानव प्राणीलाई दिनुभएको थियो। तर त्यो दिनभन्दा अघि छैठौँ दिनमा परमेश्‍वरले आफ्नो स्वरुपको प्रतिविम्ब गर्न नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। बिकासबाद अनुमानित सिद्धान्तको बिपरित मानव जीवन कुनै सुक्ष्म प्राणीबाट बिकसित नभएर परमेश्‍वरले नै आफ्नो हातबाट सृष्टि गर्नुभएको थियो भनेर बाइबलले जिकिर गर्दछ। हुन त हरेक मानिसलाई पशुको मुख हेरेर जिउने कि परमेश्‍वरको मुख हेरेर जिउने त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ।
रोचक त के छ भने जब परमेश्‍वरले आदमको सृष्टि गर्नुभयो तब उनलाई मस्त निन्द्रामा पारे उनको करङ्गबाट हवा सृष्टि गरियो भनेको छ जसको अर्थ नारी न त नरको पाऊमुनि हुनुपर्छ न त शिरमाथि। यस प्रक्रियाले नर र नारी दुवै समान छन् भनेर बाइबलले वकालत गर्दछ। जब आदमको अगाडि हव्वालाई उभ्याइयो उनलाई आफ्नो पत्‍नि भनेर उनले स्विकारे र बाइबलमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि जब स्त्रीपुरूख बैबाहिक जीवनमा बाधिन्छन् तिनीहरूको बीचमा कुनै पनि आमाबाबु, सासु वा ससुराले आउन मनाही छ। तिनीहरू छुट्टै घरपरिवार भएकोले तिनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा कोही आउन हुँदैन भनेर बाइबलले निर्देशन दिँछ। कतिपय घरमा हुने मूल झगडाको कारण दम्पत्तिलाई एकलै नछोडि घरको अरू परिवारले हस्तक्षेप गर्दा नै भएको पाइएको छ। मानिस जुनसुकै धर्मका किन नहोस् चाहे कतिपय समयमा ती क्रिस्चियन भनाउँदाहरू नै किन नहोस्, नर र नारीमा भएको परमेश्‍वरको प्रतिरुपको आत्मज्ञानको अभावले गर्दा एक आपसमा दमन निति अपनाएको हुन्छ। हामीहरूको देशका नारीहरू उच्च ओहोदामा पुगेतापनि नारी स्वतन्त्रताको आवाज घन्किरहेकै छ। धन, सम्पत्ति, पद तथा ओहोदा प्राप्‍त गर्दैमा नारी स्वतन्त्रता नहुने भनेर बाइबलले बिभिन्न तरिकाले आभास् दिइरहेका छन्। पापले गर्दा परमेश्‍वरको श्रापमा सबै मानवप्राणी परेका छन्। उहाँले आदम र हव्वालाई यो उच्चारण गर्नुभयो, ूबालक जन्माउने बेलामा तिम्रो प्रसब बेदना हुनेछ। तिम्रो चाहना तिम्रो श्रीमानपत्ति हुनेछ र तिमी उनको अधिनमा बस्नेछौ।ू यसलाई मानिसहरूले बँग्याएर नारी वा श्रीमतीलाई दमन गर्ने बहाना पाइरहेको छ। कुनै पनि नारी श्रीमानको चाहना गर्नु स्वभाव हो। तर कतिपय नारीहरू श्रीमानको चाहना नगरि बसेका हुन्छन्। त्यो स्वतन्त्रता उनलाई परमेश्‍वरले दिनुभएको छ। श्रीमानको अधिनमा बस्नु पर्छू भनेर सम्बोधन गरिएको परिप्रेक्ष्यमा बाइबलले यो उजागर गरेको छ कि यदि पतीले आफ्नो शरीरलाई आफ्नो अधिनमा राख्‍न सकेन भने उसले आफ्नो पत्‍नीलाई पनि अधिनमा राख्‍न जानेको हुँदैन। यदि धर्मको नाउँमा आफ्नो पत्‍नीलाई दमन गर्छ भने पतीको सम्पूर्ण धर्मकर्म परमेश्‍वरको अगाडि निकम्मा हुन्छ भनेर पनि बाइबलले खुलासा गरिएको छ। कसरी अधिनमा राख्‍ने भनेर अझ सोच्दा जसरी येशूले आफ्नो चर्चलाई (विश्‍वासी जनहरू चाहे ती स्त्रीहोस् चाहे पुरुष होस्) प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो ज्यानसमेत दिनुभयो त्यही तरिकाले पतीले आफ्नी पत्‍नीलाई पनि व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले जिकिर गर्दछ। नर नारीको वा पती तथा पत्‍नीको बीचमा हुने आधिपत्यको आदर्श नमूना येशू हुनुहुन्छ। यदी नारीले बिवाह गर्न चाहन्न भने उनलाई कुनै पुरुषले अधिनमा राख्‍ने अधिकार छैन भनेर पनि येशूनितिले देखाएको छ। हो, राष्ट्रसंघको बडापत्रमा मानव अधिकारका विभिन्न दस्तावेजहरू छन्, ती अनुसार कार्यान्वन गर्न सबै राष्ट्रहरूलाई महाभारत भइरहेको छ। परमेश्‍वरले केवल पशुहरूमाथि मात्र रजाईँ गर भनेर बाइबलमा कोरिएको छ। तर जब एकले अर्को माथि दमन गर्छ र रजाईँ गर्न खोज्छ त्यो रजाईँमा पर्ने व्यक्ति पशुमा झर्छ। परमेश्‍वरको स्वरुपलाई पशु बनाउने अधिकार उहाँले कसैलाई पनि दिनुभएको छैन।
छोराछोरीहरू जन्माउने र हुर्काउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनि दम्पत्तिलाई नै सुम्पिएको थियो। येशूका एक चिन्तक एलेन जी ह्वाइटले भन्नुभएको थियो ूछोराछोरीहरूको नजिकको परमेश्‍वर भनेको आमाबाबु नै हुन्। घर ९भवन होइन० यस संसारमा स्वर्गको वातावरणले प्रतिविम्बित हुनुपर्छ अर्थात् घर यस संसारमा सानो स्वर्ग हुनुपर्छ।ू तर दुर्भाग्यले गर्दा यस आलेखकको समेत अनुभवमा कतिपय घर स्वर्गको होइन तर नरकलाई प्रतिविम्ब बनाइराखेको हामी पाउँछौँ। छोराछोरीहरूलाई खुवाउन नसक्ने वा स्याहार्न नसक्ने आमाबाबु नास्तिक भन्दा पनि गएगुज्रेको हुन्छ भनेर पनि बाइबलले खुलासा गरिएको छ।
निश्कर्षमा यस आलेखको अन्तिम भागमा बाइबलले नारीलाई कस्तो उच्च सम्मान गरिएको छ भनेर केही सुत्रहरू उदृध गरिन्छस्
­आफ्नो श्रीमतीसँग कचकच गर्ने श्रीमानको प्रार्थना वा पुजापाठ परमेश्‍वरले वास्ता गर्नुहुन्न।
­येशूका सबै उपासकहरू पुजारी हुन्। त्यसको अर्थ महिलाहरू केवल घर धान्नेमात्र होइन आत्मिक रूपमा परमेश्‍वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थतता गर्ने अधिकार बाइबलले दिएको छ। यसले लैङ्गिक असमानतालाई हटाउँछ।
­येशूको पुनरुत्थानमा पुरुषलाई होइन महिलालाई पहिलो दर्शन उहाँले दिनुभएको थियो।
­येशूको आत्मज्ञानमा नारीहरू अत्यन्त निपुण भएका थिए भनेर बाइबलले बारम्बार देखाइएको छ। येशू मर्ने थाहा पाएर एक जना नारीले उहाँको पाऊ धोएकी थिइन्।
­बाइबलको हितोपदेशको पुस्तकमा नारीलाई बुद्धिको संज्ञा दिएको छ, अर्थात् घर तथा संसार चलाउन नारी बुद्धिको आवश्यता पर्छ।
­ नयाँ करारमा पती श्रीमतीको शिर भनेर उल्लेख गर्छ भने गुणिलो पत्‍नी श्रीमानको मुकुट भनेर भनेर कहलाइएको छ। जसरी मुकुटलाई हिफाजत गरेर राखिन्छ त्यसरी नै श्रीमानले श्रीमतीलाई हिफाजत गरेर राख्‍नुपर्छ।
यस लेखमा समुद्ररूपी बाइबलको केवल एक अञ्‍जुलीमात्र प्रस्तुत गरिएकोछ। त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र आत्मसात् नगर्ने अधिकार सबैलाई दिइएको छ भनेर बुझ्दै यस लेखप्रति कसैको पूर्वाग्रह नहोस् भन्न यस लेखको रचयिताको कामना छ।
अप्रिल ज्ञण्, द्दण्ज्ञट